समाचार::Leading News Portal From Kathmandu
एमबीएस प्रथम वर्षको तथ्याङ्कशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र ‘आउट’ गर्ने पाँच जनालाई सोमबार पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालनमा रहेको एमबीएस प्रथम वर्षको तथ्याङ्कशास्त्र विषयको प्रश्नपत्रको उत्तर तयार...
सांसद यादवले दिए राजीनामा
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सांसद डा.सूर्य नारायण यादव (सुरज)ले राजीनामा दिएका छन् । सोमबार यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या बढेकाले आराम गर्न राजीनामा दिएको सांसद यादवले बताएका छन् । उनले...
सन्दीप लामिछानेलाई किन अमेरिकाले भिसा दिएन ?
२८ साउन, काठमाडौं । युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जान अमेरिकाको भिसा आवेदन दिएका थिए । तर, दूतावासले अस्वीकार गरेको हो। सन्दीपले एक ट्वीट गर्दै...
जापानले नर्सिङ कियर गिभरमा जाने कामदारका लागि भाषा र सीप परीक्षण गर्ने मिति टुङ्गो लगाएको छ । कात्तिक १० र ११ मा भाषा परीक्षा र कात्तिक १९ र २० गते सीप परिक्षण गरिने भएको...
बहुप्रतिक्षित काठमाडौँ–तराई दू्रतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन हुने भएको छ । प्रस्थानबिन्दू, रेखांकन र डीपीआर टुंगो लगाउन लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले द्रूतमार्ग निर्माणको...
सरकारले मलेसियालगातका विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि अधिकांश म्यानपावर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका ११ सय म्यानपावर कम्पनीमध्ये मुश्किलले २ दर्जन कम्पनीमात्र सञ्चालन खर्च धान्नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन्...
चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याए औषधि सस्तो हुने
नेपालका औषधि उद्योगले सोझै चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरे औषधि करिब ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । मुलुकमा करिब ८० प्रतिशत औषधीको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ । नेपालमा बर्सेनि ५५ अर्ब रुपैयाँ...
काठमाडौँ । के.आई.एफ. कुरोदय मार्शल आर्टस् संघ नेपालको पहिलो साधारणसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । थापागाउँमा रहेको कार्नीअल रेष्ट्रोको हलमा श्रावण १८ गते सरोकारवाला व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा पहिलो साधारणसभा सम्पन्न गरिएको हो । पहिलो साधारणसभाबाट पुनः एकेन्द्र बहादुर...
काठमाडौं, २६ साउन । सरकारले भोलि सोमबार सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व बकर इदको अवसरमा प्रदेश २ सरकारले सोमबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राउतले...
नेकपा बूढानीलकण्ठको अध्यक्षमा रविन अधिकारी
२४ श्रावण, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बूढानीलकण्ठको अध्यक्षमा रविन अधिकारी चयन भएका छन् । आज बसेको नेकपा काठमाडौं जिल्ला कमिटिको बैठकले अध्यक्षमा रविन अधिकारीलाई चयन गरेको हो । यस्तै सचिवमा प्रदिप डंगोललाई चयन गरिएको...